Dumarka ugu Hinaasaha Badan Aduunka oo la ogaaday halka ay ku nool yihiin Iyo Qaabka Maseryka U Qeybsamo - iftineducation.com
iftineducation.com – Hinaasaha ama maseyrka waa wax lagu beeray Haweenka, badiyaabana hinaasuhu wuxuu sababaa ama keenaa dhimasho, dil, dhaawac, hanti burbur iyo qoys kala hayaama oo dhaqsi bur bura.
Haddaba daraasad la sameeyay dhawaan laguna baarayay haweenka dunida ugu hinaasaha badan dalka ay u dhasheen ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in haweenka u dhashay dalka Newzealand ay yihiin dumarka ugu hinaasaha badan dunida. Natiijo ka soo baxday daraasad ay dhawaan arrintan ku samaysay Jaamacada Oxford University ayaa waxa ay kaga dhawaajisay in dumarka dalkaasi ay si degdegsiimo leh u caroodaan qacda ugu horreysa ee ragga xiriirka uu kala dhexaayo ay la hadlaan ama ay eegaan dumar aan iyaga ahayn.
Waxaa inta badan dhacada haddii haweenka dalkaasi ay ku arkaan lamaanayaashooda ragga ah iyaga oo eegaya ama la hadlaya gaba kale in ay kala furayaan maryo dhiig leh sida ay tahay caadada dalkaas kadibna ay sidaas isku seegayaan lamaanayaashaas. Sidoo kale natiijadii ka soo baxday baaritaankan ayaa waxaa kale oo lagu sheegay in haweenka u dhashay dalka Newzealand ay aad iyo aad uga hinaase iyo shaki badan yihiin haweenka u dhashay dalalka Kanada iyo Ingiriiska oo haweenkoodu ay ka hinaase iyo ilaalin badan yihiin marka la barbardhigo ragga dalalkaasi u dhashay.
Daraasaddani waxa ay ka dhawaajisay in haweenka dalka Newzealand ay ku lumiyaan waqtigooda qaaliga ah in ay waardiye ka hayaan oo ay la socdaan raga xiriirku kala dhexeeyo ama qaba si ay ku ogaadaan dhaqdhaqaaqa raggooda iyaga oo intaa ka ilaalinaya in ay jaleecaan ama ay la hadlaan dumar kale oo aan iyaga ahayn. Hadaba hadii aan ka soo gudubno taasi oo aan usoo dha dhacno dumurka Soomaalida ah ee ku nool dalalka qurbaha ayaa waxaa lagu daraasad in aay yahiin dumurka ugu maseerka badan marka laga soo tago kuwa ku sugan dalka gudahiisa,
Dalalka qaarada yurub Maraynka Iyo Koonfur Afrika Iyo dalal kale oo dhowar ah aya kaalinta koowaad ka galay haweenka Soomaaliyeed ee ugu hinaasaha ama maseerka badan in aay joogaan. Hadaba wixi fikraada ama sixid ama ku darin ah waa nagu soo hagaajinta kartaa ee ku saabsan qormadayna aan dulucda ugu dhignay Hinaadasaha ama maseerka.
Calaamado Cajiib Ah Oo Lagu Garto Marka Aay Gacalisadaada Ku Nacdo Ama Aaysan Danba Kaa Laheyn